November 2015 | ကမ်းလက်
အပြစ်မဲ့တဲ့ သစ်ပင်လေးတွေကို မခုတ်ကြနဲ့တော့
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော် - on 11/23/2015 - No comments
ကိုသာအေးနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ယုံကြည်ရင်း
သူတို့ပေးတဲ့ ကတိကို ယုံစားရင်း
ရွာထဲရောက်လာတဲ့ လျပ်စစ်မီးကိုတောင် မယူကြဘူးတဲ့။
၁၀၇ အိမ်စု ဒီမိုတွေက မီးလင်းနေချိန်
အမှောင်ထဲကနေ စောင့်ကြလို့ တဲ့၊
ငါတတ်နိုင်တာ ငါ အစပျိုးတယ်
၁၀၇ မိသားစုကို ရေနွေးအိုးလေးတွေ ဝေလို့
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေပါ မဲပေးခွင့်ရရင် ...
in Aung San Suu Kyi, ဇင်ဝေသော် - on 11/23/2015 - No comments
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေပါ မဲပေးခွင့်ရရင် မဲက ဒီထက်ပြတ်မဲ့သဘော။
တရုတ်ဆရာကြီး ရှီဆီကတောင် ထောက်ခံမဲ ရနိုင်တယ်။
Labels: Aung San Suu Kyi, ဇင်ဝေသော်
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 11/23/2015 - No comments
ဘယ်သူမှ မပိုင်ဆိုင်တဲ့ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီး ငါ့မှာ ရှိနေပြီပဲဆိုတဲ့အထာမျိုးနဲ့
ဘုရားရှင်က အရှင်ရဲ့ ရူပကာယတော်ကို ဖြစ်သလို ထားတော်မူခဲ့ပါ သလား။
ဘုရားရှင် အိုဗာဝိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ စာပေအထောက်အထား တွေ့ဖူး ပါသလား။
ဆံရှည်ရှည်၊ မုတ်ဆိတ်မွှေး ဗရဗွနဲ့ တွေ့ရတတ်ကြောင်းရော စာပေမှာ ဆိုထားတာ ရှိပါသလား။
ပီတိစား အားရှိ။ ခဏတော့ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမဲ့ ခဏနေ ပြန်ဆာလာမှာပါ။ ဆရာက ဗြဟ္မာမှ မဟုတ်ဘဲ။
ပဉ္စဝေါကာရ (ခန္ဓာ ငါးပါး) သတ္တဝါတိုင်းဟာ ရုပ်နဲ့နာမ် ဟန်ချက် ညှိကို ညှိကြရတယ် မဟုတ်ဘူးလား။
ဘာမှ မရှိတဲ့လူကို ရောင့်ရဲမှုအကြောင်း ပြောနေတာ ရယ်စရာ မကောင်းဘူးလား။
ဘာမှ မရှိသူကို စွန့်လွှတ်ခြင်းအကြောင်း ပြောနေတာ ရယ်စရာ မကောင်းဘူးလား။
ဒီခေတ်မှာ အခြေအနေအရ ဟန်းဖုန်းလိုတယ်၊ ပတ်စပို့စ် လိုတယ်၊ ဗီဇာလိုတယ်၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်း လိုတယ်၊ ထမင်းလိုတယ်၊ ဆေးဝါးလိုတယ်၊ ကားလက်မှတ် လိုတယ်၊ လေယာဉ်လက်မှတ် လိုတယ်။
ဈာန်ရပုဂ္ဂိုလ်က တစ်ယောက်ထဲ ကောင်းကင် ပျံနိုင်တယ်။
ဘိုးအင်း ဂျက်လေယာဉ်က လူ ၇၀၀ လောက်နဲ့ ကောင်းကင် ပျံတယ်။
ဗုဒ္ဓဒေသနာက လိုအပ်ချက် (Necessary) နဲ့ စွဲလန်းမှု (Craving) ကို ရောထွေးမထားပါဘူး။
ကျနော်တို့ အားလုံးရဲ့ အမေ
in Aung San Suu Kyi, Reader's Digest, ဇင်ဝေသော် - on 11/23/2015 - No comments
ကျမရဲ့ မူကြိုကျောင်းသားလေး တစ်ယောက်က သူ့အမေနာမည်ကို စာလုံးပေါင်းတတ်ပြီဆိုပြီး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့ ပေါင်းပြတယ်။
"မင်း မှားနေပြီ၊ အဲဒါ မင့်မေမေ နာမည် မဟုတ်ဘူး၊ ငါ့ မေမေနာမည်" တဲ့။
ဒီလ RD ထဲက ဂျုတ်ကလေး။ တိုက်ဆိုင်လို့ပါ။
Image: Digital Art by Wedhahai
Labels: Aung San Suu Kyi, Reader's Digest, ဇင်ဝေသော်
အိမ်ပြန်ချင်နေတဲ့ မြန်မာတွေ၊ စီတီဇင် မယူဘဲ ပေစောင့်နေတဲ့ မြန်မာတွေ
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 11/23/2015 - No comments
"ဆရာလတ် လာမယ့်နှစ်ထဲမှာ မြန်မာပြည်ပြန်ကြမယ့် ကျနော်တို့ ကုမ္ပဏီက ၀န်ထမ်း ဘယ်နှယောက်လောက်များ ရှိနေမလဲ"
"ကျနော်ကိုယ်တိုင် ပြန်မလို့ စဉ်းစားနေတာ"
"ဟာ ဒါဆို မြန်မာပြည်မှာ ကျနော်တို့ ကုမ္ပဏီခွဲ ထောင်ထားမှ ဖြစ်တော့မယ်"
ရွှေမြန်မာ အယ်ချုပ် ဒေါက်တာ ခင်မောင်လတ် ပြောသွားတဲ့ စကားတွေပါ။
ထိပ်တန်း ရာထူးရှိထားတဲ့ မြန်မာတွေတိုင်း ဒီမေးခွန်းမျိုး အမေးခံရလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် ဘူမိဗေဒနဲ့ ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေ တော်တော် စိတ်ပူနေရပြီ။
စလုံး အစိုးရကလည်း အိမ်ပြန်ချင်နေတဲ့ မြန်မာတွေ၊ စီတီဇင် မယူဘဲ ပေစောင့်နေတဲ့ မြန်မာတွေကို မျက်စောင်းထိုးလှပြီ။
ဆိုက်ကော်လော်ဂျီနဲ့ ရိုးသားမှုကို လုံးဝမယှဉ်နိုင်လို့
in Aung San Suu Kyi, Politics, ဇင်ဝေသော် - on 11/22/2015 - No comments
ကထိန်အသွား ကားပေါ်မှာ ပြောမိတဲ့စကား
"ပြည်ခိုင်ဖြိုးက စထရက်ဒဂျီနဲ့ ပြင်ဆင်အားထုတ်မှုမှာ ယှဉ်နိုင်တယ်ဗျ၊ ဒေါ်စုရဲ့ ဆိုက်ကော်လော်ဂျီနဲ့ ရိုးသားမှုကို လုံးဝမယှဉ်နိုင်လို့ မရှုမလှ ရှုံးသွားရတာ"
Labels: Aung San Suu Kyi, Politics, ဇင်ဝေသော်
FB ပေါ်မှာ ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်တာပဲ
in Aung San Suu Kyi, ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 11/22/2015 - No comments
FB ပေါ်မှာ ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ သူမက ဂုဏ်ထူးဆောင် အမေရိကန်စီတီဇင်လည်း ရထားတာဆို ဒါက ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လေ။
Labels: Aung San Suu Kyi, ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး
ဒေါ်စုတို့ကတော့ မနိုင်လို့ကို နှစ်ခေါက်သယ်ယူရတယ်။
in Aung San Suu Kyi, ဇင်ဝေသော်, ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - on 11/22/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared Sai Mykhong's video.
ဘုန်းဇင်တို့လည်း ပြင်သစ်လို ရပါတယ်။ ဒမာ ကျိ
အမေစု ပြင်သစ်လိုပြောသွားတာလေး .. :-*
Posted by Sai Mykhong on Friday, November 20, 2015
Labels: Aung San Suu Kyi, ဇင်ဝေသော်, ပြန်လည်မျှဝေခြင်း
ပြောစရာရှိတာ ဆက်ပြောပါ၊ ကျမကို ကြည့်မနေပါနဲ့။
ကမ်းလက် shared Aung Myo Thu's post.
November 20 at 7:22pm ·
ဘောမလေးတွေဆွေ့ ဆွေ့ ခုံလိုက်ကျစမ်း
ဖိုးစိန်ဆင့်သား အငယ်ကောင် ကြွေတဲ့ ည
in ဇင်ဝေသော်, ဖိုးစိန်ဆင့်သား အငယ်ကောင်, အမှတ်တရ - on 11/22/2015 - No comments
ဓမ္မဘေရီ ဆရာတော်ကြီးကလည်း ဒီကိုကြွလို့
ဖန်သားပေါ်မှာလည်း မန်ယူက ဆရာကျလို့
အဘိုး ဆရာတော်ကြီး နှုတ်တော်ကလည်း ဝါကျအသစ်တွေ ဖြာကျလို့
ဂင်္ဂါနဲ့ ကိုယ်က ခြေသလုံးကို တစ်ခါ နှိပ်ပေးကြလို့
(ခဏဆို တကယ် ခဏလေး)
ဓမ္မဂင်္ဂါက ကွမ်းတွေ ဝါးလို့။
ထွေးရတာခက်လို့ မစားတာပါ ဆိုပြီး
စည်တော်ကြီးကလည်း ကွမ်းရွက်ကို ထုံးသုတ်လို့
ဓမ္မဂင်္ဂါကလည်း သူ့အဘိုးအတွက် ကွမ်းသီးလေးတွေ
အောက်ထပ်အခန်းကို လိုက်ပို့ကြလို့။ ။
Labels: ဇင်ဝေသော်, ဖိုးစိန်ဆင့်သား အငယ်ကောင်, အမှတ်တရ
in ဇင်ဝေသော်, တို့တိ တို့တိ - on 11/22/2015 - No comments
အလုံးအဖန်နဲ့ ကြွက်သားချင်းတူတဲ့ ယောက်ျားတိုင်း
သူသန်သလောက်တော့ ငါလည်း သန်တယ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်
ဒီိလိုနဲ့ ကမ္ဘာမှာ လက်နက်မဲ့ နပမ်းပွဲကြီးတွေ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။
သူပြေးသလောက်တော့ ငါလည်း ပြေးနိုင်တယ်တယ်လို့ ထင်တတ်ကြတယ်
ဒီိလိုနဲ့ ကမ္ဘာမှာ အိုလံပစ်လို ပြိုင်ပွဲကြီးတွေ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။
သူတတ်သလောက်တော့ ငါလည်း တတ်တယ်တယ်လို့ ထင်တတ်ကြတယ်
ဒီိလိုနဲ့ ကမ္ဘာမှာ စာမေးပွဲစနစ် ပေါ်ပေါက်လာတယ်။
သူ့ကို ချစ်သလောက်တော့ ငါကိုလည်း ချစ်ကြပါတယ်တယ်လို့ ထင်တတ်ကြတယ်
ဒီိလိုနဲ့ ကမ္ဘာမှာ လူထုဆန္ဒကောက်ယူပွဲတွေ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 11/22/2015 - No comments
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 11/21/2015 - No comments
"မလုံ့တလုံအဝတ်အစားတွေနဲ့ ပုံတွေလည်း ဖဘမှာ တက်လာတတ်တယ်၊ ရဟန်းတွေနဲ့ ဖဘ မသင့်တော်ပါဘူးဘုရား" ဆိုတွေကလည်း သူတို့ စားရတဲ့ ညစာထမင်းဝိုင်း ကြီးတွေကို တင်တတ်ကြပြန်ရော။
ပြသနာ မရှိပါဘူး၊ ရေပေါ်မှာ ကိုယ်ဖော့နေတတ်ရင် ရေဘယ်လောက်နက်တယ် ဆိုတာက အရေးမကြီးတော့ပါဘူး။
အရယ်အပြုံးက ပဉ္စမဈာန်ရောက်မှ ကင်းသွားတာပါ။
ပဉ္စမဈာန်မရသေးဘဲ အမြဲ ခပ်တည်တည်လုပ်နေရင် ဟန်ဆောင်တာ (သို့) ရယ်လို့ လူအထင်သေးသွားမှာ စိုးရိမ်နေတာ။
"တစ်ယောက်ထဲ ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ပြုံးလိုက်မိရင် အဲဒါ တကယ် ပြုံးချင်လို့" (မစ္စတာ ဟယ်ရီ ကူးပါး)
မှတ်ချက်။ ရှန်ဂရီလာ ဟော်တယ်မှာ ရယ်နေတဲ့ ဒေါ်ထွေးထွေးကို ပြောမိတဲ့စကား။ ငိငိ။
အနောက်ကမ္ဘာက ပေးလာတဲ့ အပျော့လှိုင်း ဖိအားတွေ
in Aung San Suu Kyi, ဇင်ဝေသော် - on 11/20/2015 - No comments
အနောက်ကမ္ဘာက ပေးလာတဲ့ အပျော့လှိုင်း ဖိအားတွေ။
အခု ဘရက်ပစ်၊ ဂျိုးလီနဲ့ ကလေးတွေ။
ဘိုနိုတို့ ယူတူး အဖွဲ့
Wanted တို့အဖွဲ့တွေ ဘယ်တော့ရောက်လာမလဲ မသိဘူး။
in ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 11/20/2015 - No comments
ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကို ဂုဏ်ပြုပြောဆိုကြတိုင်း တံစဉ်တစ်ချောင်း၏ အသုံးကျမှုကို မော်မကြည့်ရဲလောက်အောင် အားနာလှပါသည်။
အမှန်တရားကို အ်ေကြီးဟစ်ကျယ် ရှာနေသူတွေနဲ့ တွေ့ရတိုင်း ဓမ္မစက္က ပဝတ္တနသုတ် (ဓမ္မကြာ) ကို အကြိမ်ကြိမ် တောင်းပန်စကား ဆိုမိပါသည်။
တချို့အခြေအနေများမှာ လူတိုင်း ကင်မရာဖက်မျက်နှာပေးပြီး ပြုံးပြခွင့် မရကြပါ။
(ဥပမာ စားပွဲမှာဝိုင်းပြီး ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်ကြရသောအခါ)
တချို့က ကျော၊ တချိ့က လက်မောင်းသာ ဓာတ်ပုံထဲမှာ တွေ့ရပါသည်။
ထိုသူတို့၏ ကျော၊ လက်မောင်းများလည်း ပြုံးနေကြသည်ဟု ထင်ပါသည်။
နှစ်ရှည်လများ နေထိုင်ခဲ့သော ရွာကလေးမှ ကျနော် နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ သည်။
ရင်မှာ အမှတ်တရတို့များစွာရှိသည်၊ သို့သော် သူများကို ပြစရာတော့ မရှိပါ။
ထို့ကြောင့် ကမ်းမှ မခွာမီ လှေပေါ်မှနေပြီး ရွာကလေးကို အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံ လှမ်းရိုက်လိုက်သည်။
တကယ်တော့ ကျနော်ဓာတ်ပုံ ရိုက်ချိန်မှာ နေဝင်စပြုနေပြီ ဖြစ်သလို ရွာ ကလေးသည်လည်း တောင်တန်းကြ်ီးနောက်ကွယ်မှာ ရောက်နေပြီဖြစ်ပါ
မိတ်ဆွေများက ကျနော်နေခဲ့သော ရွာကလေးကို ပြပါဆိုတိုင်း ထို ဓာတ် ပုံလေးကို ထုတ်ပြမိပါသည်၊ (ပြစရာဆိုလို့လည်း ဒါပဲ ရှိပါသည်)
"ဟင် မင်း ရွာက ဘယ်မှာလဲ၊ ဒါက တောင်တန်းကြ်ီးပဲ ဥစ္စာ" ဟု ပြောကြပါသည်။
"ငါ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ ရွာကလေးက အဲဒီတောင်ကြီးရဲ့ ဟို ဖက်မှာ"
"ဟာကွာ မင်းဟာကလဲ" လို့ ပြောတတ်ကြပါသည်။
ကျနော့်အတွက်တော့ တောင်တန်းကြ်ီးနောက်ကွယ်မှာ ကျနော် တကယ်နေထိုင်ခဲ့သည့် ထို ရွာကလေးရှိနေကြောင်း သေချာလှပါသည်။
သို့သော် ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ တောင်တန်းကြ်ီးပဲရှိနေကြောင်း ဝန်ခံပါသည်၊
ထို့အတူ ထိုဓာတ်ပုံလေးသည် ရွာကလေးကို ပြပါဟု ပြောလာလျင် ပြဖို့ အတွက် ရိုက်ယူခဲ့သော ဓာတ်ပုံဖြစ်ကြောင်းလည်း ကျမ်းသစ္စာဆိုရဲပါသည်။
အမှာ။ ။ ကမ်းလွန်ပင်လယ်များ (၂) ဆိုသဖြင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်များ (၁) ရှိသည်ဟု မထင်မှတ်စေလိုပါ။
ဒေါ်စုက ပြောင်းလဲချင်သူပါ၊ တပ်မတော်ကို အတိုက်အခံလုပ်သူ မဟုတ်ပါဘူး။
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 11/20/2015 - No comments
၁။ ဒေါ်စုက ပြောင်းလဲချင်သူပါ၊ တပ်မတော်ကို အတိုက်အခံလုပ်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ဦးရွှေမန်းနဲ့ပုံဆို မောင်နှမ ကျနေတာပဲ။
၂။ စင်္ကာပူ ဆရာကြီးတွေကလည်း မျှမျှတတ ဂုဏ်ပြုစကားတွေပြောလို့။ သဘောကျတယ်။ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်း အရေးပါပါတယ်။
in ဇင်ဝေသော်, ဘောလုံး - on 11/20/2015 - No comments
၁။ ရက်စက်ခြင်း၊ ပွဲစတဲ့အချိန်ကစလို့ ဂိုးဘယ်လောက်ရရ ဆက်သွင်းဖို့ ကြိုးစားနေခြင်း၊ လျှော့ချလို့ မရ။ ဒါဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လစ်ဇင်ပါ။
၂။ လူသားဆန်ခြင်း၊ ပွဲသိမ်းခရာမှုတ်တာနဲ့ တစ်ဖက်အသင်းသားတွေကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း၊ တီရှပ်တွေလဲလှယ်ခြင်း၊ ပခုံးဖက် ချွေးသိပ်ပေးခြင်း၊ အလွန်ရင်းနှီးသူဆိုရင် "မင်းတို့ ညံ့လို့မဟုတ်ပါဘူး၊ ကံတရားကကို တို့ဖက်မှာ ရှိနေလို့ပါ" စတဲ့ စာနာစိတ်အခြေခံ စကားလေးတွေပြောပေးခြင်း၊ ဒါဟာ လည်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လစ်ဇင်ပါပဲ။
အားကစားသမား အများစုမှာ (၁) ရှိနေတတ်ပြီး (၂) ကိုတော့ ရင့်ကျက်တဲ့ ကစားသမားတွေဆီမှာပဲ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ တခါတခါ မညီမျှဘူး ထင်ရတဲ့ ဒိုင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အားနည်းမှု၊ မှားယွင်းမှုစတာတွေကြောင့် (၂) ကို လိုက်နာ ဖို့ ခက်နေတတ်ပြန်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ (၂) နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ကစား သမားကို လူတိုင်းက အထင်ကြီး လေးစားကြပါတယ်။ တကယ့် မိုးထဲရေထဲ ပွဲတွေမှာ အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားတဲ့ ကစားသမားတွေဟာ အဲသလို စိတ်ဓာတ် တည်ငြိမ် မာကြောတဲ့ ကစားသမားတွေပဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် "မင်းတို့ ညံ့လို့မဟုတ်ပါဘူး၊ ကံတရားကကို တို့ဖက်မှာ ရှိနေ လို့ပါ" ဆိုတဲ့စကားကြောင့် မိမိအသင်းသားတွေရဲ့ ကြိုးစားမှုနဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသွားနိုင်မှုတွေကို တစ်ပြားသားမှ လျော့ကျ မသွားစေပါဘူး။ ပိုလို့တောင် ဂုဏ်တက်ပါသေးတယ်။ ဒီစကားဟာ တစ်ဖက်သားရဲ့ မျက်ရည်အချို့ကို သုတ်ပေးရာရောက်သလို လူသားဆန်ရာလည်း ရောက်ပါတယ်။
လောကထဲက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လစ်ဇင်ကိုလည်း သွေးနည်းနည်း အေးသွား တဲ့အခါ ရေးကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။
"တွား ခုမ လာခေါ်မေနက်"
in ကစ်ဆင်းဂျား, ဇင်ဝေသော် - on 11/19/2015 - No comments
ပစ်ထားမိတာ ကြာသွားတော့ ကစ်ဆင်းဂျားကြီးက စိတ်ကောက်။
"တွား ခုမ လာခေါ်မေနက်" လုပ်နေတယ်။
ပေဖတ်တော့ ထိုင်ခုံပေါ် အိပ်ပျော်သွားရော။ ဟူး။
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 11/19/2015 - No comments
"စစ်ပွဲတွေ ရပ်" ဆိုတာနဲ့
"ချစ်သူတိုင်း ညားကြပါစေ" ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းဟာ သဘာဝလွန်ဆုတွေပဲ။
(Nov 19 ,9:21am)
စစ်ပွဲဆိုတာကတော့ ဘယ်တုန်းကမှ ကောင်းတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ ပြသနာတွေတက်နေလို့ဆိုပြီး ဘဏ်ကောက်သွားမယ့် စီးပွားရေးသမားက လှည့်ပြန်မသွားတတ်ပါဘူး။
(Nov 18 10:36am)
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 11/19/2015 - No comments
ဇေကမ္ဘာတို့ သွက်ချက်ကတော့ စုကြည်လှိုင်းစီးဖို့ အဆင်သင့်တဲ့။
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 11/18/2015 - No comments
မပေနိုင်တော့တဲ့အဆုံး သာသနာပြုဘုန်းက နာဂရွာလေးကနေ ညမှာ တိတ်တဆိတ် ထွက်ပြေးလေရော။
သိသွားတဲ့ရွာသားတွေက လှံတွေ ဓါးတွေကိုယ်စီဆွဲပြီး လိုက်ဖမ်းကြသတဲ့။
မှီလည်းမှီရော လှံတွေနဲ့ချိန်ထားပြီး ဘမာဘုန်းကြီး ကောင်းကောင်းထား ကောင်းကောင်းမနေဘူး။ နောက်တစ်ခါ ဒါမျိုးလုပ်ရင် လှံစာမိပြီသာမှတ် တဲ့။
ဟဲ ဟဲ လစ်ပီ။
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 11/18/2015 - No comments
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်လောက်က ယမိုက်၊ ၁၀ တန်း အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ ထိုင်ဖူးတဲ့နေရာလေး။ အခုလည်း အေးမြဆဲပါပဲ။ သစ်ရွက်တို့ အနိစ္စကြားမှာ အရိပ်လေးက မပြောင်းဘူး။
စင်္ကာပူမှာ နေရတာ မငြီးငွေ့သေးဘူးလား
in ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ, ဇင်ဝေသော် - on 11/18/2015 - No comments
စင်္ကာပူမှာ နေရတာ မငြီးငွေ့သေးဘူးလားလို့ ရဟန်းငယ်တစ်ပါးကမေးတော့
ငြီးငွေ့စရာ မရှိဘူးဆိုတာလောက်ပဲ ဖြေခဲ့မိတယ်။
ကိုယ်တကယ်သိတဲ့ စင်္ကာပူက နားလည်မှုရှိတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းလေးရယ်၊ ကိုယ်လုပ်ချင်ရာ လုပ်ခွင့်ရနေခြင်းရယ်ပါ။ ဆင်တိုဆာတွေ စူပါမားကက်တွေ မပါဘူး။ နေရာတော်တော်များများကို ရောက်လည်း မရောက်ဖူးဘူး။
နောက်ပြီး စင်္ကာပူက ရဟန်းတစ်ပါးဟာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုက အစ လွတ်လပ်နေတယ်။ မိရိုးဖလာယဉ်ကျေးမှုအရ အမြင်ရိုင်းနိုင်ပေမဲ့ သူ့စနစ်နဲ့သူ လစာ ဆိုတာကလည်း စိတ်ကို ပိုလွတ်လပ်စေတယ်။ ဟင် ဘုန်းကြီးတွေကလည်း လစာနဲ့လားလို့မေးရင် နိုင်ငံဥပဒေအရ ဟုတ်ပါတယ်လို့ပဲ ဖြေရမှာပါ။
တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲယူလာတဲ့ စနစ်ကြောင့် ငါ့မှာ တာဝန်တွေရှိပါလားဆိုတဲ့ အသိစိတ်ထက်ပိုပြီး ငါမရှိရင်တော့ မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး မရှိဘူး။ ဒီလူမရှိရင် ဟိုလူလုပ်ပေါ့။ ဒါကလည်း လွတ်လပ်ခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ။ ငါမရှိတော့ရင် မြန်မာဘုန်းကြီး ရှိနိုင်ပါတော့မလား ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတောင် မရှိချင်တော့ဘူး။ စွမ်းတဲ့သူ လူကြီးဖြစ်ပေါ့။ ဒါက ဒီမိုကရက်တစ်ပဲ။ ဘုရားစကားတော်တွေနဲ့လည်း ကွက်တိပါပဲ။
စာရေးစာဖတ်ကို ဘ၀ရဲ့ အဓိက အစိတ်အပိုင်းထဲ ထည့်ထားတော့ ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေ ဒါတွေလုပ်ခွင့်ရနေတဲ့နေရာဟာ ပျော်စရာပါပဲ။ ဒါတွေ လုပ်ခွင့်မရတဲ့နေ့မှာ စင်္ကာပူဟာ ငြီးငွေ့စရာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အခုတော့ မီးမပျက်၊ ခြင်မရှိ၊ တစ်ကိုယ်ရေ လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်ရှိတဲ့နေရာလေးကို သမုဒယပါးပါးနဲ့ တွယ်နေဆဲပါပဲ။
ဒီနှစ်တွေအတွင်း ရေးမိတဲ့ စာမျက်နှာတွေကို ပြန်ရေတွက်ကြည့်မိတော့ မဆိုးလှဘူး ဆိုတာလောက်တော့ ပြနေပြန်တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ.....
Labels: ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ, ဇင်ဝေသော်
ကျနော် မေတ္တာဆက်ပို့မယ်၊ စာဆက်ရေးမယ်။
in ဇင်ဝေသော်, ရင်ဖွင့်သံ - on 11/17/2015 - No comments
ဇင်ဝေသော်ရဲ့ အကောင့်ပျောက်မှုက ဇင်ဝေသော် ရေးမယ့်စာတွေကို မတားဆီးနိုင်ပါဘူး။
ဖိုးစိန်ဆင့်သား အငယ်ကောင်ကလည်း အတူတူပါပဲ။
ချစ်ခင် လေးစား ပညာရှင်ဆန်မှုတွေအတွက်...
Labels: ဇင်ဝေသော်, ရင်ဖွင့်သံ
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 11/05/2015
ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးများနှင့် ရင်းနှီးကြွမ်းဝင်ရာမှ အစပြုကာ ကေသ မုတ္တိရွာ၊ ကာလာမ မျိုးဆက်၊ ဝိဘဇ္ဇဝါဒနှင့် ဘုရားရှင်၏ ခေတ်မီသော ရပ် တည်ချက်တို့ အနောက်မှာပင် လူကြိုက်များခဲ့သည်။
ဝိဘဇ္ဇ=စူးစမ်းဝေဖန်၊ ပိုင်းခြား စီစစ်ဟူသည်
၁။ သူတပါးကို ဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းလား
၂။ မိမိဘာသာ စီစစ်၍ လက်ခံခြင်းလား။
ကေသမုတ္တိသုတ်ကတော့ ဒုတိယ အဓိပ္ပါယ်ကို ပို၍ အားပေးနေ သလို တွေ့မြင်ရသည်။ ပထမလည်း ပါပါသည်။
ဝိဘဇ္ဇ=စူးစမ်းဝေဖန်၊ ပိုင်းခြား စီစစ်ဆိုရာ၌
၁။ လုံလောက်သော ထိုထို ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ
၂။ ခိုင်မာသော စာပေ၊ အတွေ့အကြုံ
၃။ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သော အမြင်
၄။ အလယ်အလတ်ကျသော သဘောထားရပ်တည်မှု
ဒါတွေရှိမှ ထို ဝိဘဇ္ဇလည်း မှန်ပေလိမ့်မည်။
(၁ နှင့် ၂ က ယနေ့ခေါ်ကြသည့် Research သဘောတရားဖြစ်ပြီး
၃ နှင့် ၄ က Open-minded ဖြစ်နေခြင်းသဘော ဖြစ်ပေသည်။)
တစ်ဆင့်ခြင်း မြင့်လာသော မင်္ဂလသုတ်တော်မှာတော့
၁။ ကာလေန ဓမ္မသာဝနာ (တရားနာ၊ လေ့လာဆည်းပူး) ပြီးမှ
၂။ ကာလေန ဓမ္မသာကစ္ဆာ (တရားဆွေးနွေး၊ ဝေဖန်ပိုင်းခြား) လုပ်ရန် လမ်းညွှန်ချက်တွေ့ရသည်။
လုံလောက်သော ဗဟုသုတ၊ အတွေ့အကြုံ စသည်မရှိသေးပဲ
ထိုထို ဝေဖန်စိစစ်မှုတို့ မှန်ရန်မလွယ်ကူဟု ဆိုလိုတော်မူဟန်ရှိသည်။
ဘုရားရှင်သည် ဝိဘဇ္ဇဝါဒကို အားပေးတော်မူ၏။ ၅၀ ရာခိုင်းနှုံး မှန်သည် (ဟုထင်၏)
ထို့အတူ ဝိဘဇ္ဇကြရန် ဗဟုသုတနှင့် အတွေ့အကြုံရှိဖို့လည်း လိုကြောင်း ထောက်ပြတော်မူ၏။ ရာနှုံးပြည့် မှန်သည် (ဟုထင်၏)
အိမ်ပြန်ချင်နေတဲ့ မြန်မာတွေ၊ စီတီဇင် မယူဘဲ ပေစောင်...
ဆိုက်ကော်လော်ဂျီနဲ့ ရိုးသားမှုကို လုံးဝမယှဉ်နိုင်လိ...
ဒေါ်စုက ပြောင်းလဲချင်သူပါ၊ တပ်မတော်ကို အတိုက်အခံလုပ...